my kitchen my life: ကျွန်တော်နှင့် B. L . T
ကျွန်တော်နှင့် B. L . T
kitchen ထဲစရောက်စကတော့ ဘာလဲပေါ့။ BLT ဆိုတာ။ သီချင်း အဖွဲနာမည်လိုလို ဘာလိုလို ဆိုတော့၊ ဟီး..။ နောက်မှ ဆရာ ခိုကရှင်းပြတယ်။ B = bacon, L=lettuce ( iceberg ), T=tomato ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ပိုပြီး မြင်သာအောင် ၀ီကီ ကဟာပါ ကူးရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
The BLT (bacon, lettuce, and tomato) isatype of bacon sandwich. The BLT traditionally has several strips of well-cooked or even crispy bacon, leaves of lettuce (traditionally iceberg or romaine), and slices of tomato, between slices of bread (commonly toasted). Mayonnaise is the traditional condiment for the BLT. The BLT is recorded as being the second most popular sandwich in the United States, after the ham sandwich. ( from wiki )
Posted by leo mark at 4:48 PM
Evy December 4, 2009 at 6:37 PM
အဲလို sandwich မျိုးတော့ကြိုက်တယ်။ Subway ကဟာမျိုးလေ။
ရေတမာ December 4, 2009 at 7:22 PM
ကြိုက်တယ်ဗျ sandwich တော့
ချမ်းလင်းနေ December 5, 2009 at 9:58 AM
သရေယိုလာပြီဗျာ။ ဆုံရင်လုပ်ကျွေးဗျာ။ စာကောင်းတာမှန်သမျှ ကြိုက်တယ်။ ဂျီးမများဘူး။:)
nguwahwin December 7, 2009 at 4:46 PM